Barakacayaal horay u soo barakacay oo ka sii barakacaya Gaalkacyo (SAWIRO) – SBC
Barakacayaal horay u soo barakacay oo ka sii barakacaya Gaalkacyo (SAWIRO)
Ku dhawaad 8gaari oo nooca xamuulka qaada ee loo yaqaano Waraad, ayaa ka anbabaxay Magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo ay saaranyihiin Qoysas Barakacayaal ah, islamarkaana mudo ku dhaqnaa Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Dadkaan oo iskugu jira Rag, Dumar iyo Caruur, Ayaa waxa ay wataan Alaabtoodii Hoy iyo midii Cuntada ay ku karsanayeen, Ayagoona socdaal u ah Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya oo ay qaarkood halkaasi horay ugaga soo barakeceen.
Arintaan ayaa timid kadib markii dhawaanahaan Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland lagu arkayay maydad dad ka soo jeeda Gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya oo la soo dhigayo Wadooyinka.
Ayadoo ay taasi jirto ayaa hadana waxaa magaalada Gaalkacyo ka dhacay Dagaallo qaraar, oo islamarkaa qaraase xoogan geystay , taasina ay sabab u tahay in gabi ahaan maanta iyo Shalay ay iskaga huleelaan Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug dadkan barakacayaasha ah.
Dhan walba hajirtee Waa markii labaad ay barakacaan dadkaani, Ayadoona la xasuuto in horay ay uga soo barakaceen Koonfurta Dalka Soomaaliya halkaasi oo ay ka socdeen Dagaalo, waxaana tani ay imaanaysaa Xili Dagaalo iyo Dilal Qorshaysan loogu gaystay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland.